कानमा पहिरिने बाली र झुम्का को वैज्ञानिक कारण के ?
सेप्टेम्बर 1, 2016 अक्टोबर 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक
हिन्दु महिलाले कानमा बाली र झुम्का पहिरिन्छन् । महिलाको लगाउने यसलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । यतिसम्मकी आफ्ना बुज्रकहरुको भनाइलाई धारणा बनाउँदैं महिलाहरु पनि फेसनका रुपमा यी गहनाहरु पहिरिने गरेका छन् । तर, यससँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ ।
बाली वा झुम्काको सहयोगबाट पनि कानलाई लामो देखाउन सकिन्छ । टप्स लगाउनाले कान अझ सानो देखिन्छ । जसको गर्दन मोटो छ, उनीहरूले लामो र ठूलो बाली लगाउनु हुँदैन । गोलो मुहारमा ठूलो, अण्डाकार र गोलो इयररिङ राम्रो देखिन्छ । अण्डाकार मुहारमा सानो गोलाइ भएको टप्स राम्रो देखिँदैन, तिनमा बाली वा लामो हेङ्गिंग्स राम्रो हुन्छ । गर्दन मोटो र फुलेको छ भने टाँसिने नेकलेस लगाउनु हुँदैन । लामो माला वा स-साना मोतीका दानाको माला सुहाउँदिलो हुन्छ ।
मुहार लामो छ भने लामो खालको इयररिङ्स लगाउनु हुँदैन । सेन्डेलियर वा स्टड्स लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । चाहनाअनुसार गोलाकार वा त्रिकोण सेपयुक्त इयररिङ्स लगाउन सकिन्छ । मुहार ओवल हुनेहरूजस्ता भाग्यमानी अरू कोही हुँदैनन्, कारण यसप्रकारको मुहार भएकाहरूलाई हरेक प्रकारको ज्वेलरी सुट गर्छ । ओवल फेसमा हरेक प्रकारको इयररिङ्स लगाउन सकिन्छ ।
← खुट्टामा औठी लगाउनुको वैज्ञानिक कारण के ?
पाउजु पहिरिनुको वैज्ञानिक कारण के ? →